Araraoty ny fotoana malalaka anananao amin'ny boky Destroza este diary | Famoronana an-tserasera
Mianara Mampivelatra ny famoronana raha milalao ianao, olo-masina, mihira, mandoko, mifalifaly ary lasa adala tanteraka amin'ny alàlan'ny gazety tsy ara-dalàna izay hampirisika anao hitondra izany rehetra izany fahaiza-mamorona izay entinao ao anatiny. Smash ity diary ity dia hamoaka ny kinova farany adala anao amin'ny alàlan'ny fampiasana zavakanto ho fitaovana ho an'ny fampandrosoana ny famoronana.
Izany dia boky mamorona tokoa izay hamporisika anao isan'andro isan'andro hanoratra bebe kokoa ary hampivelatra ny fahaizanao ho mpanakanto adala tsara indrindra eo amin'ny tontolon'ny famoronana feno loko, manjelanjelatra, loko ary maro hafa.
Tsy isalasalana fa ny boky Destroza este diary dia iray amin'ireo boky miavaka tsara amin'ity karazana ity, a fomba mahazatra izay tsy maintsy ifandraisan'ny mpamaky amin'ny boky amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana samihafa ary zavatra, fomba mahaliana hanatsarana izany tahotra ny famoronana izay ananan'ny ankamaroan'ny olon-dehibe izany, izany no antony azon'ny olon-dehibe ampiasaina ny gazety fa tsy ny ankizy na ny tanora ihany.
Amin'ny sary eto ambany dia afaka mahita ohatra iray isika izay mamporisika antsika handoto ny tanantsika amin'ny loko ary hamela ny dian-dianay amin'ny taratasy, izany dia fomba mahatsikaiky tokoa milalao miaraka amin'ny ankizy na ny tenantsika.
Ny dinamika ao amin'ny diary dia tokony hatao zavatra tsy mitovy amin'ny pejy tsirairay, amin'ny pejy iray dia azon'izy ireo atao ny mangataka anay hanapaka collage ary amin'ny iray hafa dia afaka miteny aminay izy ireo handro amin'ny gazety. Amin'ity karazana boky ity dia tsy misy fetra, ireo fetra ireo dia apetraky ny sainao sy ny fanirianao mahalasa adala anao ary raiso izay famoronana rehetra entinao ao anatiny.
Raha hampiasa an'ity boky ity dia mila a karazana fitaovana lehibe asa tanana, avelako lisitra kely ireo fitaovana mety ilainao:
Rehefa manana fitaovana sasantsasany ianao dia afaka midina miasa ary manomboka mampivelatra ny famoronana rehetra miaraka amin'ny fanampian'ity kely ity isan'andro azontsika atao ny miditra amin'ny fivarotam-boky na amin'ny alàlan'ny aterineto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Araraoty ny fotoana malalaka anananao amin'ny boky Destroza este diary